ikofu kunye nengxowa yeti
ibhegi yeziqhamo eyomileyo
ibhegi ukutya ukutya kwezilwanyana
inja ukutya ibhegi
ingxowa yekati yenkunkuma
Ezinye iingxowa zezilwanyana
Enye ibhegi yengqolowa
retort retreat & ibhegi engumkhenkce
Ezinye iibhegi zokutya
Ingxowa ye-Cannabis Sachet
I-cannabis yima ibhegi
ingxowa yokumelana nomntwana
ukulungele ukuhambisa ibhegi
ibhegi iphepha tyaba
yima ibhegi yephepha
icala gusset iphepha lephepha
ibhegi yephepha elisicaba
roll umboniso weplastiki
iphepha lefilimu esongwayo
ibhegi yokuphuma ngaphandle
ukutya kwengxowa yomntwana
Ibhegi ezinokuboliswa ziintsholongwane
Elungiselelweyo sauce sauce wholes ...
Elungiselelweyo ibhegi ingca cat ...
Ungayisebenzisa njani ifilimu yam eshukumayo ...
Ukulungele ukuhambisa bonke ubungakanani bunoku ...
Yimani ema kwakhona reseala ...
Ukuxhathisa kwesiko esityibilikisayo se-cannabis
Isityibilikisi uziphu wokumelana nengxowa yomntwana ujongeka umhle kakhulu, kwaye enobugcisa. Ukuze nje sifumane le bhegi ityibilikisi, kufuneka si-odole uziphu okhethekileyo, kwaye kufuneka sifake isilayida engxoweni ngesandla. Oko kuyakuxabisa ixesha kunye nemali. Kodwa kufanelekile oko.
Ukulungele ukuhambisa bonke ubungakanani beebhegi ze-cannabis
Senza ikakhulu umsebenzi we-OEM, oko kuthetha ukuba siya kuvelisa iibhegi ngokohlobo lwengxowa yakho efunekayo, ubungakanani, izinto eziphathekayo, ubukhulu, ushicilelo kunye nobungakanani. Ngelixa ngoku kukho iimfuno ezinkulu zokuba zilungele ukuthunyelwa kweebhegi, emva koko sidibana nemarike, kwaye sizama konke okusemandleni ethu ukwenza ezona zoyilo zibalaseleyo kunye nomgangatho wakho.
Iplastikhi yokuxhathisa komntwana eshicilelweyo okwenziwe ngokwezifiso
Senze ubungakanani obahlukeneyo beebhegi zepinki, ezinye ziingxowa ezincinci, abantu baya kubeka iimveliso zabo ngqo kuyo. Ngelixa abanye abathengi bathanda ukwenza ibhegi enkulu yepineki, njenge-9 `` X12 '', njengebhegi yokuthenga. Bayakubeka ibhegi evenkileni, nje ukuba kubekho umthengi othabatha iibhegi ezincinci ezahlukileyo, baya kufaka zonke iingxowa ezincinci kule ngxowa enkulu yokuthenga, bayitywinele njengoko kufunwa ngurhulumente.
Kabini uziphu wokuxhathisa i-cannabis
Uziphu Double luhlobo uziphu ekhethekileyo enokukhusela abantwana kwimveliso ngaphakathi iingxowa, kukho ukuvulwa inkohliso ngasemva kwiingxowa, ukuba ufuna ukuvula iingxowa, kufuneka utsalo umaleko ngaphambili kunye umaleko umva ngaxeshanye Ngaphandle koko ayinakuvulwa Iyaziwa kakhulu kwiingxowa ze-cannabis.
Yimani ngokwezifiso ibhegi ye-cannabis ethengiswayo
Yima ibhegi yokutshi ye-zip lolona hlobo lusetyenziswa kakhulu ekupakisheni i-cannabis, nokuba ziphi na iintyatyambo ezomisiweyo okanye ikofu, iswekile, ii-cookies ezongeza nge-CBD okanye i-THC. Uninzi lwabathengi bathanda umhlaba ocwebezelayo ngefestile, ikwakhona ngoku ukuprinta kwe-UV yindlela entsha.
I-China i-wholesale i-cannabis sachet bag
Kwi-cannabis, njengeentyatyambo ezomileyo, ngesiqhelo abantu baya kukhetha ukuphakama kweebhegi kuba ifuna indawo enkulu. Ngelixa ezinye zeepilisi, iibhegi ezincinci zesakhethi ziya kuba lukhetho olungcono. Sinokwenza into encinci ye-4 * 5cm ibhegi, ngelixa ubungakanani obuqhelekileyo buyi-5 * 12cm, njengebhegi yeCarttel engezantsi. Kananjalo nakwiingxowa ezincinci ze-cannabis, unokwenza i-mat, glossy okanye i-UV, ngefoyile okanye ngaphandle, ngefestile, uziphu, njl.
Ifowuni: +86 312-6770499
Idilesi: Igumbi le-310, Liangjiayingzi 2-59, Isitalato iNanshao, Kazuo, Chaoyang, Liaoning, China